भेटेको बाह्र लाख फिर्ता गर्ने छात्रा सम्मानित |
भेटेको बाह्र लाख फिर्ता गर्ने छात्रा सम्मानित
प्रकाशित मिति :2017-02-06 11:01:28
सुनसरी । जिल्लामा दुई छात्रा ज्योति राई र सुनिता राईको चर्चा चुलिएको छ । चर्चा हुनुपर्ने कारण पनि छ । उनीहरु दुवैले आफुले भेटेको १२ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता गरेका थिए ।
उनीहरुको इमान्दारिताको कदर गर्दै योनान साहित्यिक अभियान नेपालले गत शुक्रबार धरानको महेन्द्र क्याम्पसमा एक कार्यक्रम गरि दुवैलाई सम्मान गरेको छ । सो कार्यक्रममा प्रा.डा.नोबेलकिशोर राई, प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपाने र अभियानका अध्यक्ष सीताराम सूचारुले संयुक्त रुपमा उनीहरुलाई सम्मान पत्रका साथ दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रा.डा. न्यौपानेले राई बहिनीहरु समाजमा आर्दश र उदाहरणीय बनेको बताउनुभयो । यसैगरि, प्रा.डा. नोवेल किशोर राईले समाज जतिसुकै भ्रष्ट र विकृत बन्दै गएपनि इमान्दार व्यक्तिहरुको पनि कमि नरहेको बताउनुभयो ।
१६ वैशाख ०७३ मा धरानको विश्वकर्मा मन्दिर नजिक भएको एक दुर्घटनामा ओमबहादुर गेलालको साथबाट झरेको १२ लाख रुपैयाँ ती दुवै छात्राले भेट्टाएका थिए । रकम भेटेपछि उनीहरुले गेलालका आफन्तलाई सम्र्पक गरी फिर्ता गरेका थिए ।
ज्योति महेन्द्र क्याम्पस धरानमा विए प्रथम वर्षमा अध्ययरत हुनुहुन्छ भने सुनिता उर्लाबारी क्याम्पसमा बिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययरत हुनुहुन्छ ।